संयुक्त राज्य अमेरिका मा हॉटस्टार कसरी हेर्ने? (जहाँसुकै पनि अनब्लक गर्नुहोस्) - मनोरञ्जन
हटस्टार मनोरन्जन सामग्रीको एक विस्तृत श्रृंखलाको साथ एक अत्यधिक सस्तो प्लेटफर्म हो। यसको सम्भाव्यताले यसलाई अन्य धेरै भन्दा सस्तो बनाउँछ स्ट्रिमि apps अनुप्रयोगहरू संयुक्त राज्य अमेरिका मा विकल्पहरू। हाल, हॉटस्टार आधिकारिक रूपमा क्यानाडा, बेलायत, भारत र इन्डोनेशियामा उपलब्ध छ।
हटस्टारका बिभिन्न संस्करणहरू उपलब्ध छन्। त्यहाँ डिज्नी + हटस्टार विशेष रूपमा भारत र इन्डोनेशियामा उपलब्ध छ। यस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र क्यानडामा हटस्टारले यसका साथ डिस्ने + सेवाहरू प्रदान गर्दैन। यो एक स्ट्यान्डअलोन अनुप्रयोग हो जसले केहि भारतीय (बलिउड) सामग्री प्रदान गर्दछ जुन अन्तर्राष्ट्रिय इजाजत पत्र छ।
यी सीमितताहरूले तपाईंलाई प्लेटफर्मको प्रयोगबाट निरुत्साहित गर्न सक्दछ। यद्यपि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं हटस्टार हेर्न सक्नुहुन्छ। यस लेखमा, हामी यी विधिहरू आधिकारिकबाट उपयुक्त भन्दा कममा अन्वेषण गर्नेछौं तर अझै सम्भव छ।
एक्सप्रेसभीपीएन प्रयोग गरी नेटफ्लिक्स हेर्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिका मा हॉटस्टार हेर्न मार्गदर्शन:
तपाईं आधिकारिक भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट संयुक्त राज्य अमेरिका को संस्करण को लागी हॉटस्टार को। यस विशेष क्षेत्रमा दर्शकहरूको लागि कुनै पनि नि: शुल्क सामग्री उपलब्ध छैन। त्यहाँ, तपाईंले आधिकारिक अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्नेछ र योजनाको सदस्यता लिनुपर्नेछ। सदस्यता प्रक्रिया सजिलो छ। त्यहाँ एक सात दिने फिर्ती नीति छ यदि तपाइँ सेवाहरू मन पराउनुहुन्न।
यदि तपाईं हटस्टारको सदस्यता लिनुभयो भने, तपाईं एकल उपकरणमा एकैचोटिमा दुई भिडियोहरू सहजै अनुप्रयोगको भित्र स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। हटस्टारले five उपकरणहरूसम्म रेजिष्ट्रेसन प्रदान गर्दछ। जहाँसम्म, योजना मा निर्भर गर्दछ, तपाईं एकै साथ दुई देखि तीन उपकरणमा एकै साथ हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनुप्रयोगको अनुकूलता केही हदसम्म स्मार्ट उपकरणहरू जस्तै स्मार्टफोन, ट्याब्लेटहरू, र स्मार्ट टिभीहरूमा सीमित छ। तपाईं यसलाई अन्य कन्सोलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर त्यहाँ पीसीहरूको लागि ब्राउजर संस्करण उपलब्ध छ।
यो विधि अपेक्षाकृत सीमित छ र तपाईंलाई हटस्टारमा पहुँच प्रदान गर्दछ जुन अमेरिकी दर्शकहरूको लागि उपलब्ध छ। तपाईंसँग भारतीय सामग्री र अन्य स्ट्रिमि services सेवाहरूको सीमित पहुँच हुनेछ। हटस्टार अमेरिकाले दर्शकहरु लाई उचित रुपमा यसको सामग्रीको हिसाबले मूल्य निर्धारण गर्दछ। जे होस्, तपाईं राम्रो फाइदा लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं डिज्नी + हटस्टार संस्करण प्रयोग गर्नुभयो भने। यस विधि पछि यसको विधि तल उल्लेख गरिएको छ।
जे होस्, यदि तपाईं अझै राज्यहरूका लागि आधिकारिक संस्करण प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ चरणहरू:
आधिकारिक वेबसाइट us.hotstar.com हेर्नुहोस्
अनुप्रयोग खोज्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
कुनै नि: शुल्क सामग्री छैन, अनुप्रयोग सुरूवात गर्दा, यो सदस्यता लिन सोध्नेछ
तपाईं सामग्री दर्ता गर्न सुरू गर्न, दर्ता गर्न र लग इन गर्न सक्नुहुनेछ
तपाईंले आफ्नो भुक्तानी प्रमाणहरू प्रदान गर्नु पर्छ।
यदि तपाईं सामग्रीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, त्यहाँ-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी छ जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
हॉटस्टारलाई फायरस्टिकमा कसरी हेर्ने?
अमेजन प्ले स्टोरमा हॉटस्टारको लागि आधिकारिक अनुप्रयोग उपलब्ध छ। तपाईं मा कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ फायरस्टिक प्ले स्टोर खोजी गर्न र अनुप्रयोग प्राप्त गर्न। तपाईं यसलाई त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र मानक स्ट्रिमि service सेवाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जे होस्, तपाईंलाई अझै पनि सदस्यता चाहिन्छ, युएसमा फायरस्टिकमा हटस्टारको मजा लिनको लागि अन्य उपकरणहरू जस्तै।
Hotstar कसरी डाउनलोड गर्ने?
तपाईं सम्बन्धित प्ले स्टोरबाट तपाईंको उपकरणको लागि हटस्टार डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो गुगल, एप्पल र अमेजन प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं आधिकारिक वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ स्ट्रिम गर्न वा त्यहाँबाट अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न। यी सबैलाई तपाइँले सामग्री स्ट्रिम गर्नको लागि हटस्टारको सदस्यता लिन आवश्यक छ।
यदि तपाईं भारतीय हटस्टारको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले तल उल्लेख गरिएको निश्चित शट विधि पाउनुहुनेछ। अहिलेको रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि आधिकारिक रूपमा कुनै डिज्नी + हटस्टार उपलब्ध छैन। डिज्नी + Hulu सदस्यता अधिक तपाईंको चियाको कप हुन सक्छ।
Disney + Hotstar कसरी हेर्ने?
हटस्टार एक पटक संसारमा उपलब्ध थियो, प्रत्येक क्षेत्रमा। अब यसले भौगोलिक लक र भू-प्रतिबन्ध यसको उपयोगिता र सामग्रीमा पहुँच सीमित गर्न पनि प्रयोग गर्‍यो। क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा विशिष्ट संस्करणहरू उपलब्ध छन्। डिज्नी + हटस्टार विशेष रूपमा भारत र इन्डोनेशियामा उपलब्ध छ।
तसर्थ, डिज्नी + हटस्टार प्रयोग गर्नका लागि तपाईले एउटा विश्वसनीय प्रयोग गर्नुपर्नेछ VPN (भर्चुअल निजी नेटवर्क)। यद्यपि हटस्टारले भीपीएन-ब्लाकिंग सेवा प्रयोग गर्दछ, नेटफ्लिक्स जस्ता। यो धेरै असम्भव छ कि एक नि: शुल्क VPN हटस्टारको VPN- लक पार गर्न सक्षम हुनेछ। त्यस्तै, नि: शुल्क VPN सेवा प्रयोग गर्न यो जोखिमपूर्ण छ।
डिज्नी + होस्टारको लागि कुन VPN प्रयोग गर्ने?
तपाईं बजारमा उपलब्ध प्रीमियम VPN सेवा प्रदायकहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै जसोको लागि बिक्री हुन्छ। प्राय: ती सबैले बहुविध उपकरणहरू (पाँच वा बढी) प्रस्ताव गर्दछ। तसर्थ, यदि तपाईं कोष मा कम छ, तपाईं आफ्नो परिवार वा साथीहरु संग पिच प्रीमियम-ग्रेड VPN को सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ।
धेरै VPN प्रदायकहरु नि: शुल्क परीक्षण वा पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्न को लागी प्रस्ताव गर्नुहोस् यदि तपाई नि: शुल्क VPNs चाहानुहुन्छ। उदाहरण को लागी, ExpressVPN एक रेफरल कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ साथीलाई सामेल हुन सक्नुहुन्छ, तपाइँ र तपाइँको साथीले -० दिने नि: शुल्क परीक्षण पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंले थप साथीहरू थप्नुभयो भने, परीक्षण अवधि विस्तार हुनेछ।
सदस्यताले तपाइँलाई डिज्नी + हटस्टार हेर्नका लागि केवल लाभ लिन सक्दैन तर तपाइँलाई पूर्ण VPN सुरक्षा र अज्ञातता ल्याउँदछ। यो डिस्ने + हटस्टार र अन्य प्रतिबन्धित सामग्री र अनुप्रयोगहरू ट्र्याक नगरी स्ट्रिम गर्नको लागि उत्तम छ।
यहाँ तपाईं कसरी डिज्नी + हटस्टार हेर्न VPN प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको उपकरणको लागि प्रीमियम VPN डाउनलोड गर्नुहोस्
सदस्यता लिनुहोस् वा परीक्षण संस्करण प्रयोग गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले VPN सक्रिय गर्नुभयो, एक भारतीय सर्भरमा जडान गर्नुहोस्
भारतीय सर्वर डिज्नी + हटस्टारका लागि इन्डोनेसियाली भन्दा राम्रो छ
एकचोटि तपाईंले भारतीय सर्भरमा जडान गर्नुभयो, हटस्टारको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्।
अब तपाईं अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा अनलाइन स्ट्रिम गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुभयो, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Disney + Hotstar प्रयोगका फाइदाहरू:
भारतीय सर्वरबाट -
डिज्नी + हटस्टार प्रयोग गर्ने अनगिनत फाइदाहरू छन् मानक हटस्टार युएसएले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी। पहिलो, सदस्यता शुल्क भारतीय संस्करण को लागी सस्ता छ। यस बाहेक, यहाँ छिटो तुलना चार्ट छ:
नि: शुल्क अनलाइन स्ट्रिमि। उपलब्ध छ
विशेष भारतीय सामग्री उपलब्ध छ
बलिउड चलचित्र र कार्यक्रमहरू
डिज्नी + उपलब्ध छ
मार्वल, पिक्सार, र राष्ट्रीय भूगोल समावेश छ
-०-दिन नि: शुल्क परीक्षण
हिन्दी वा अंग्रेजी र अन्य भाषाहरूमा हेर्नुहोस्
भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरू जस्तै HBO, स्टार नेटवर्क, र अधिक
युएसए सर्वरबाट -
स्ट्रिमि forको लागि सदस्यता आवश्यक छ
अमेरिकी सामग्रीमा सीमित
केवल अन्तर्राष्ट्रिय इजाजतपत्र बलिउड सामग्री उपलब्ध छ
मार्वल, पिक्सर, र राष्ट्रीय भूगोलको लागि कुनै पहुँच छैन
--दिनहरू पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी
अ in्ग्रेजीमा हेर्नुहोस्
अमेरिकाका च्यानलहरू मात्र
जब तपाईले तुलना गर्नुहुन्छ, यो स्पष्ट हुन्छ कि डिज्नी + होस्टार होटस्टारको उच्च संस्करण हो। अब, सम्झनुहोस् कि प्रत्येक पटक जब तपाईं Disney + Hotstar प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईले संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्ट्रिम गर्न VPN सक्रिय गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं उत्तम योजना प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो हटस्टारको मानक सदस्यता भन्दा सस्तो छ।
हटस्टार एक भारतीय स्ट्रिमि app अनुप्रयोग हो जुन सीमित देशहरूमा उपलब्ध छ। यदि तपाईं साँच्चिकै यसको क्षमताको अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक VPN र डिज्नी + हटस्टार सदस्यता संग उत्तम हुनुहुन्छ।जे होस्, यदि तपाईं कानूनी बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ, यो VPN प्रयोग गर्न गैर कानूनी होईन। तपाईं या त सामग्री पाइराटिंग गर्दै हुनुहुन्न, किनकि तपाईं अझै सदस्यताको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ।
यो सबै विधिहरू हुन् जुन तपाईं Hotstar स्ट्रिम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जो डिज्नी + हटस्टार प्रयोग गर्न चाहँदैनन् तर हटस्टार युएसएको संस्करणमा टाँसिनुहोस्, आधिकारिक विधि प्रयोग गर्नुहोस्।अन्तमा, तपाईं डिस्नी + हटस्टार स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्न भने पनि, अनुप्रयोग लगानीको लायक छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक सस्ता सेवा प्रदायक को प्रति माह प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण संग र बर्ष को लागी एक हो। तपाईले यो कुनै पनि हिसाबले लगानीको लायक पाउन सक्नुहुन्छ
डिज्नी प्लस नि: शुल्क परीक्षण कसरी प्राप्त गर्ने?
डिज्नी प्लस (२०२०) को लागि सर्वश्रेष्ठ VPN
पीसी को लागी उत्तम मोबाइल एमुलेटर
रोबलोक्समा नि: शुल्क संगीत कसरी अपलोड गर्ने
www.amazon.com/primevideos नि: शुल्क परीक्षण
खेलहरू बिना एडोब फ्ल्यास प्लेयर अनब्लक गरियो
नयाँ फिल्म रिलीज नि: शुल्क अनलाइन हेर्नुहोस्
स्ट्रिमिंग संगीत साइटहरू अवरुद्ध छैनन्
नि: शुल्क अनलाइन स्ट्रिमि tv टिभी कार्यक्रमहरू